မန်စီးတီး အရံအသင်းက ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မော်ရင်ဟိုရဲ့ သုံးသပ်ချက်က ဘာကြောင့်မှန်နိုင်တာလဲ !!! - SPORTS MYANMAR
မန်စီးတီး အရံအသင်းက ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မော်ရင်ဟိုရဲ့ သုံးသပ်ချက်က ဘာကြောင့်မှန်နိုင်တာလဲ !!!
ရီးရဲလ် ၊ယူနိုက်တက် ၊ ချဲဆီးလ် အသင်းတွေရဲ့ နည်းပြဟောင်း တဦးဖြစ်တဲ့ မော်ရင်ဟိုဟာ နည်းပြ လောက နဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်နေခဲ့တာ တနှစ် နီးပါး ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အတွင်း စတင်ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေ နဲ့ အပြိုင် ဆိုသလိုပဲ ဘောလုံးလောက အတွင်းကို ပြန်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။
ဒီပေါ်တူဂီ သားကြီးဟာ ကလပ် အသင်းတသင်းကို ကိုင်တွယ်မယ့် နည်းပြအဖြစ် ပြန်ရောက်လာတာမဟုတ်ပဲ Sky Sports ရဲ့ ဘောလုံးပွဲဝေဖန်သုံးသပ်သူအဖြစ်ပြန်လည် နိုင်ငံတကာ ဘောလုံးစင်မြင့်ထက်ကို ပြန်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။’ရောက်ရောက်ချင်းဆောက်နဲ့ထွင်း ‘ ဆိုသလို သူ့ရဲ့စကားတခွန်းကြောင့် ပရိသတ်တွေအတော်လေးပွဲကျ သွားခဲ့ရပါသေးတယ်။
အကြောင်းကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်အဆင့် တစ်နေရာအတွက် ဘယ်သူတွေပြိုင်ဆိုင်သွားမှာလဲ လို့ မေးမြန်းရာမှာ မော်ရင်ဟိုက – “မန်စီးတီး အသင်း၊ စပါးအသင်း၊ လီဗာပူး အသင်းနဲ့ မန်စီးတီး Bအသင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲအတွင်းပါဝင် ခြင်းမရှိတဲ့ အရံခုံတန်းက ကစားသမားတွေကို ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာ မန်စီးတီး B အသင်းက ချန်ပီယံ ဆုအတွက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် ယူဆမိပါတယ် ” လို့ဖြေသွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
မော်ရင်ဟိုဟာ ပေါ်တို၊ ရီးရဲလ်၊ အင်တာ၊ ချဲဆီးလ် ၊ ယူနိုက်တက် အစရှိတဲ့ ဥရောပ ထိပ်သီး အသင်းတွေကို ကိုင်တွယ်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေ အလီလီ ရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို နာမည်ကျော်နည်းပြကောင်းတဦး ရဲ့ အဆိုဟာ ဖြစ်နိုင်ခြေ တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကို မန်စီးတီး အသင်းရဲ့ အရံအင်အားကို လေ့လာသုံးသပ်ရင်းသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး အနေနဲ့ မန်စီးတီး အသင်းရဲ့ ပွဲထွက်စာရင်းကို ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၄-၃-၃ ကစားကွက်ကို ခင်းကျင်းလေ့ရ်ှတာဖြစ်ပြီး ပါဝင်လာတတ်တဲ့ ကစားသမားတွေကတော့
နောက် – ဝေါ်ကာ၊ လာပေါ်တေး၊ ဂျွန်စတုန်း၊ ဇင်ချန်ကို ။
အလယ် – ဒီဘရိုင်း၊ဖာနန်ဒင်ဟို၊ဒေးဗစ်ဆေးလ်ဗား။
ရှေ့ – ဘာနာဒိုဆေးလ်ဗား၊ အဂွေရို၊ စတာလင် ။တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ အသင်းရဲ့ အရံ ကစားသမားတွေကို ၄-၃-၃ အခင်းအကျင်းနဲ့ စီစဉ်ကြည့်ရာမှာတော့
ဂိုး – ဘရာဗို
နောက် – ကန်ဆယ်လို၊ အော်တာမန်ဒီ၊ ဂါစီယာ၊ မန်ဒီ။
အလယ်- ဂန်ဒိုဂမ်၊ ရိုဒရီ၊ဖိုဒန်။
ရှေ့ – မာရက်ဇ်၊ ဂျေးဆု ၊ ဆာနေး ။အစရှိသဖြင့် မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရံအသင်းရဲ့ ဂိုးသမားဖြစ်သူဘရာဗိုဟာ အသက် ၃၆နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးယမန်နှစ်က လိဂ်ပွဲတပွဲမှ ပါဝင်မကစားခဲ့ရပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်း ပထမဂိုးသမား ဖြစ်သူ ဘရာဇီးလ်သား အီဒါဆန် နဲ့ အရည်အသွေးပိုင်း ကွာဟချက်တော့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အရံ အသင်းရဲ့ အခြားနေရာအလိုက် ကစားသမားတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် ပထမအသင်းသားတွေနဲ့ သိသိသာသာကွာဟချက်ရှိမနေတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောစရာအဖြစ် လူငယ်ဗဟို ခံစစ် ကစားသမားလေး ဂါစီယာ ရဲ့ နေရာတနေရာသာ ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
နွေရာသီ အတွင်းမှာဂျူဗီအသင်းကနေ ပေါင်သန်း ၆၀နဲ့ရောက်လာတဲ့ ညာနောက်ခံလူ ကန်ဆယ်လို ဆိုရင် ဝေါ်ကာရဲ့ နေရာကိုတောင် လုယူလာနိုင်ခြေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် လီဗာပူး ကြယ်ပွင့်လေး အာနိုးက ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးညာနောက်ခံလူအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
မန်ဒီကလည်း တချိန်က အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးပြသခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဒဏ်ရာတွေကြောင့်သာ ပွဲတွေနဲ့ ဝေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တာမန်ဒီကလည်း တောင့်တင်းတဲ့ ခံစစ်အတွက် ကစားသမားကောင်းတဦးအဖြစ်ရှိနေပါတယ်။
ဖာနန်ဒင်ဟိုက ပထမဦးစားပေးအဖြစ်ဆက်ရှိနေနိုင်သေးပေမယ့် အေတီကို အသင်းကနေ ရောက်လာတဲ့ ရိုဒရီဟာ ဝက်စ်ဟမ်းနဲ့ ပွဲမှာ ပုံစံကောင်းပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာ အဆိုပါ ဘရာဇီးလ်သားရဲ့ နေရာအတွက် ကာလရှည် အစားထိုး
မန်စီးတီး အရံ အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်အင်အားကို ကြည့်လိုက်ရင်လည်း ကြောက်စရာကောင်းနေတာကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆာနေးဟာ ကစားသမားကောင်းတဦးဖြစ်ပေမယ့် စတာလင်ရဲ့ တောက်လျှောက် ကောင်းမွန်တဲ့ ခြေစွမ်းတွေကြောင့် သာ နေရာပျောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
အာဖရိကနိုင်ငံများဖလားဆုရှင်မာရက်ဇ်ကလည်း သူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင် သန်း ၆၀ နဲ့ ထိုက်တန်ကြောင်းတဖြည်းဖြည်းပြသလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အထောင်တိုက်စစ် မှူး ဂျေးဆုက လည်း အဂွေ ရိုနဲ့ အပြိုင် ပွဲထွက်ခွင့် တွေရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် မန်စီးတီး Bအသင်း ရဲ့ နေရာစုံဟာ ပြီးပြည့်စုံ မှု နီးပါး အထိ ရှိနေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း ဟိုဆေးမော်ရင်ဟိုရဲ့ မန်စီးတီး အရံအသင်းက ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုအတွက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စကားဟာ မှန်ကန်တယ်လို့ ယေဘုယျ ကောက်ချက်ချနိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
မနျစီးတီး အရံအသငျးက ပရီးမီးယားလိဂျ ခနျြပီယံဖွဈနိုငျတယျဆိုတဲ့ မျောရငျဟိုရဲ့ သုံးသပျခကျြက ဘာကွောငျ့မှနျနိုငျတာလဲ !!!
ရီးရဲလျ ၊ယူနိုကျတကျ ၊ ခြဲဆီးလျ အသငျးတှရေဲ့ နညျးပွဟောငျး တဦးဖွဈတဲ့ မျောရငျဟိုဟာ နညျးပွ လောက နဲ့ အဆကျအသှယျပွတျနခေဲ့တာ တနှဈ နီးပါး ရှိလာပွီဖွဈပါတယျ။သူဟာ ပွီးခဲ့တဲ့အပတျအတှငျး စတငျခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျတှေ နဲ့ အပွိုငျ ဆိုသလိုပဲ ဘောလုံးလောက အတှငျးကို ပွနျဝငျရောကျလာပါတယျ။
ဒီပျေါတူဂီ သားကွီးဟာ ကလပျ အသငျးတသငျးကို ကိုငျတှယျမယျ့ နညျးပွအဖွဈ ပွနျရောကျလာတာမဟုတျပဲ Sky Sports ရဲ့ ဘောလုံးပှဲဝဖေနျသုံးသပျသူအဖွဈပွနျလညျ နိုငျငံတကာ ဘောလုံးစငျမွငျ့ထကျကို ပွနျရောကျလာတာဖွဈပါတယျ။’ရောကျရောကျခငျြးဆောကျနဲ့ထှငျး ‘ ဆိုသလို သူ့ရဲ့စကားတခှနျးကွောငျ့ ပရိသတျတှအေတျောလေးပှဲကြ သှားခဲ့ရပါသေးတယျ။
အကွောငျးကတော့ ပရီးမီးယားလိဂျအဆငျ့ တဈနရောအတှကျ ဘယျသူတှပွေိုငျဆိုငျသှားမှာလဲ လို့ မေးမွနျးရာမှာ မျောရငျဟိုက – “မနျစီးတီး အသငျး၊ စပါးအသငျး၊ လီဗာပူး အသငျးနဲ့ မနျစီးတီး Bအသငျး တို့ ဖွဈပါတယျ။ ပှဲအတှငျးပါဝငျ ခွငျးမရှိတဲ့ အရံခုံတနျးက ကစားသမားတှကေို ကွညျ့လိုကျတဲ့ အခါမှာ မနျစီးတီး B အသငျးက ခနျြပီယံ ဆုအတှကျ ယှဉျပွိုငျနိုငျတယျဆိုတာကို ကြှနျတျော ယူဆမိပါတယျ ” လို့ဖွသှေားတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။
မျောရငျဟိုဟာ ပျေါတို၊ ရီးရဲလျ၊ အငျတာ၊ ခြဲဆီးလျ ၊ ယူနိုကျတကျ အစရှိတဲ့ ဥရောပ ထိပျသီး အသငျးတှကေို ကိုငျတှယျပွီး အောငျမွငျမှုတှေ အလီလီ ရရှိထားသူဖွဈပါတယျ။ဒီလို နာမညျကြျောနညျးပွကောငျးတဦး ရဲ့ အဆိုဟာ ဖွဈနိုငျခွေ တှအေမြားကွီးရှိနတေယျဆိုတာကို မနျစီးတီး အသငျးရဲ့ အရံအငျအားကို လလေ့ာသုံးသပျရငျးသိမွငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
အရငျဆုံး အနနေဲ့ မနျစီးတီး အသငျးရဲ့ ပှဲထှကျစာရငျးကို ကွညျ့ရမှာဖွဈပါတယျ။ ၄-၃-၃ ကစားကှကျကို ခငျးကငျြးလရှေျ့တာဖွဈပွီး ပါဝငျလာတတျတဲ့ ကစားသမားတှကေတော့
နောကျ – ဝျေါကာ၊ လာပျေါတေး၊ ဂြှနျစတုနျး၊ ဇငျခနျြကို ။
အလယျ – ဒီဘရိုငျး၊ဖာနနျဒငျဟို၊ဒေးဗဈဆေးလျဗား။
ရှေ့ – ဘာနာဒိုဆေးလျဗား၊ အဂှရေို၊ စတာလငျ ။တို့ဖွဈကွပါတယျ။ သူတို့ အသငျးရဲ့ အရံ ကစားသမားတှကေို ၄-၃-၃ အခငျးအကငျြးနဲ့ စီစဉျကွညျ့ရာမှာတော့
နောကျ – ကနျဆယျလို၊ အျောတာမနျဒီ၊ ဂါစီယာ၊ မနျဒီ။
အလယျ- ဂနျဒိုဂမျ၊ ရိုဒရီ၊ဖိုဒနျ။
ရှေ့ – မာရကျဇျ၊ ဂြေးဆု ၊ ဆာနေး ။အစရှိသဖွငျ့ မွငျတှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။
အရံအသငျးရဲ့ ဂိုးသမားဖွဈသူဘရာဗိုဟာ အသကျ ၃၆နှဈအရှယျရှိနပွေီဖွဈပွီးယမနျနှဈက လိဂျပှဲတပှဲမှ ပါဝငျမကစားခဲ့ရပါဘူး။ဒါကွောငျ့လညျး ပထမဂိုးသမား ဖွဈသူ ဘရာဇီးလျသား အီဒါဆနျ နဲ့ အရညျအသှေးပိုငျး ကှာဟခကျြတော့ရှိနတောဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အရံ အသငျးရဲ့ အခွားနရောအလိုကျ ကစားသမားတှကေို ကွညျ့လိုကျရငျ ပထမအသငျးသားတှနေဲ့ သိသိသာသာကှာဟခကျြရှိမနတောကို တှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။ပွောစရာအဖွဈ လူငယျဗဟို ခံစဈ ကစားသမားလေး ဂါစီယာ ရဲ့ နရောတနရောသာ ရှိနတောဖွဈပါတယျ။
နှရောသီ အတှငျးမှာဂြူဗီအသငျးကနေ ပေါငျသနျး ၆၀နဲ့ရောကျလာတဲ့ ညာနောကျခံလူ ကနျဆယျလို ဆိုရငျ ဝျေါကာရဲ့ နရောကိုတောငျ လုယူလာနိုငျခွရှေိနတောဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့ လီဗာပူး ကွယျပှငျ့လေး အာနိုးက ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ အကောငျးဆုံးညာနောကျခံလူအဖွဈ သတျမှတျနိုငျနတောဖွဈပါတယျ။
မနျဒီကလညျး တခြိနျက အကောငျးဆုံးအရညျအသှေးပွသခဲ့သူဖွဈပွီး ဒဏျရာတှကွေောငျ့သာ ပှဲတှနေဲ့ ဝေးနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။အျောတာမနျဒီကလညျး တောငျ့တငျးတဲ့ ခံစဈအတှကျ ကစားသမားကောငျးတဦးအဖွဈရှိနပေါတယျ။
ဖာနနျဒငျဟိုက ပထမဦးစားပေးအဖွဈဆကျရှိနနေိုငျသေးပမေယျ့ အတေီကို အသငျးကနေ ရောကျလာတဲ့ ရိုဒရီဟာ ဝကျဈဟမျးနဲ့ ပှဲမှာ ပုံစံကောငျးပွသနိုငျခဲ့ပါတယျ။သူဟာ အဆိုပါ ဘရာဇီးလျသားရဲ့ နရောအတှကျ ကာလရှညျ အစားထိုး
မနျစီးတီး အရံ အသငျးရဲ့ တိုကျစဈအငျအားကို ကွညျ့လိုကျရငျလညျး ကွောကျစရာကောငျးနတောကို မွငျရမှာဖွဈပါတယျ။ဆာနေးဟာ ကစားသမားကောငျးတဦးဖွဈပမေယျ့ စတာလငျရဲ့ တောကျလြှောကျ ကောငျးမှနျတဲ့ ခွစှေမျးတှကွေောငျ့ သာ နရောပြောကျနတောဖွဈပါတယျ။
အာဖရိကနိုငျငံမြားဖလားဆုရှငျမာရကျဇျကလညျး သူ့ရဲ့ပွောငျးရှကွေ့ေးပေါငျ သနျး ၆၀ နဲ့ ထိုကျတနျကွောငျးတဖွညျးဖွညျးပွသလာနပွေီဖွဈပါတယျ။အထောငျတိုကျစဈ မှူး ဂြေးဆုက လညျး အဂှေ ရိုနဲ့ အပွိုငျ ပှဲထှကျခှငျ့ တှရေရှိနပွေီဖွဈပါတယျ။
ထို့ကွောငျ့ မနျစီးတီး Bအသငျး ရဲ့ နရောစုံဟာ ပွီးပွညျ့စုံ မှု နီးပါး အထိ ရှိနတောကိုမွငျရမှာဖွဈပါတယျ။ဒါကွောငျ့လညျး ဟိုဆေးမျောရငျဟိုရဲ့ မနျစီးတီး အရံအသငျးက ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဆုအတှကျ ယှဉျပွိုငျနိုငျတယျဆိုတဲ့ စကားဟာ မှနျကနျတယျလို့ ယဘေုယြ ကောကျခကျြခနြိုငျနတောဖွဈပါတယျ။